कांग्रेस जाग्न र जगाउन थाल्यो-केदार सुवेदी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ००:४९ English
कांग्रेस जाग्न र जगाउन थाल्यो-केदार सुवेदी
२०६८ को वर्ष नेपाली कांग्रेसका लागि जनजागरण अभियानको वर्षमा परिणत भयो। यो वर्षको सुरु वैशाख–जेठ पार्टीभित्रका आफ्ना त्यसबेलासम्मका विवादहरू मिलाएर एकताको सन्देश बोकेर गाउँ पसेका कांग्रेसका नेताहरूलाई देशव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त भएको थियो। त्यसले ठाउँठाउँमा गरेका प्रदर्शनीहरू यति भव्य भए कि त्यो संविधानसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई निकास दिने तहसम्म पुगे। यो प्रदर्शनीको परिणाम यो वर्षको जेठ १४ देखि संविधानभन्दा पहिले शान्ति भन्ने विषयले प्राथमिकता पायो। त्यसअघिसम्म माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई संविधानसँग जोडेर यी दुई कुरासँगसँगै जानु र लानुपर्छ भनिरहेको थियो। कांग्रेसले आफ्नो पृष्ठभूमिमा देखिएको जनउपस्थिति र त्यसको अडानका कारण माओवादी गल्न बाध्य भयो। जेठ १४ को तीनबुँदे सम्झौताको पहिलो बँुदामा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याएरमात्र संविधान लेखनको कार्य सुरु हुने कुरा स्पष्टसँग किटियो। यहीँ दिनदेखि शान्तिप्रक्रियाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको हो। तर माओवादीले त्यसलाई सम्झौतापछि पनि आलटाल गरी टारिरह्यो र यो वर्षको अन्तिम महिना चैत्रमा कांग्रेस एउटा अर्को जनप्रदर्शनमा ओर्लिएको छ।
प्रशिक्षण र प्रदर्शनीसँगसँगै
‘गाउँ जागरण तथा शान्ति अभियान’ नाउँको कार्यक्रम पार्टी तहबाट र ‘दु्रत अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन भइरहेका र हुन गइरहेका छन्। पार्टीले हप्ता दिनभित्र एकैचोटी ७० वटा जिल्लामा व्यापक प्रदर्शनी र आमसभाको कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ भने त्यसको संस्था प्रतिष्ठानले अभिमुखीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सबै जिल्लाका र सबै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रशिक्षण र कार्यकर्ताबीच व्यापक संवाद चलाउन थालेको छ। पार्टीको यो कार्यक्रम चैत्र १ बाट सुरु भएको छ भने पार्टीको प्रतिष्ठानले फागुनको अन्तिम हप्ता पूर्र्वाञ्चलबाट कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसको पहिलो चरण ६–७ वीरगन्ज, ९–१० धनगढी, १२–१३ नेपालगन्जसम्मको कार्यक्रम तय भएको छ।
प्रदेश लहर बढ्दै निर्वाचन
यो बीचमा कतिपय जिल्ला, क्षेत्र र इकाइहरूमा समेत सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। ती प्रशिक्षण कार्यक्रमका उद्घाटन समारोहमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर झन् बढ्दै गएको छ। फागुन २८ मा दैलेखको एउटा कार्यक्रममा मात्रै एमाले र माओवादीबाट हजारभन्दा बढीको संख्या नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरसकेको छ। यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रकाशमान सिंहका अनुसार त्यहाँ सम्बन्धित पार्टीका पदाधिकारीको तहसमेत खुलाइएको थियो। प्रवेशमा एरिया इन्चार्जहरू पनि छ।
नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पहिलो थालनी सुनसरीको इटहरीबाट भएको थियो। पूर्वाञ्चलका १६ जिल्ला र ५६ निर्वाचन क्षेत्रबाट सहभागिता रहेको त्यो कार्यक्रमलाई सहभागीहरूले मिनी महासमिति भन्ने संज्ञा दिएर कार्यक्रम जति भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो त्योभन्दा झन् बढी कार्यकर्तामा रहेको जिज्ञासु प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई उत्साहित तुल्यायो। फलस्वरूप उद्घाटन सत्रका लागि भनी जानुभएको केन्द्रीय सभापति, महामन्त्रीहरू दुई दिनसम्म आफैं त्यसको एउटा सहभागी प्रतिनिधि जस्तो भएर बस्नुभयो। आफ्ना केन्द्रीय सभापति र पदाधिकारीहरू आफूसरहको सहभागी भएको पाउँदा कार्यकर्ताहरू पनि त्यति नै उत्साहित भएका थिए जति नेताहरू भए। कार्यकर्ताको यो उत्साह देखेर नै यसलाई तत्काल नै देशव्यापी बनाउन प्रतिष्ठानले बाटोको म्याद एकदुई दिनमात्र अन्तर हुने गरी कार्यक्रम तय गर्योल। वीरगन्जमा गएका नेताहरू एकैचोटी धनगढी र नेपालगन्जका कार्यक्रममा सहभागी भएरमात्र राजधानी फर्कने छन्।
पार्टीमा प्राण सञ्चार
जिल्ला तहबाट आफ्नै पहलमा ठाउँठाउँमा प्रशिक्षण भइरहे पनि संगठित रूपमा केन्द्रले यो बेलासम्म कुनै कार्यक्रम दिन सकेको थिएन। इटहरी कार्यक्रमले जस्तो उदाहरण दियो त्यसपछि यस्ता कार्यक्रमलाई कांग्रेसले पार्टीमा प्राण सञ्चार गर्ने ठान्यो। ७५ वटै जिल्लामा प्रदर्शनी र आमसभा गर्ने कुराको पहिलो जानकारी पनि इटहरीबाटै भएको थियो। त्यसको लगत्तै पछि ७ दिनभित्र सबै जिल्ला पुग्ने गरी कार्यक्रमको सूची बनाएर सर्कुलर गरियो र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेताले भन्दा कार्यकर्ताले हरेक विषयमा कस्ता धारणा बनाएका छन् र उनीहरूको अपेक्षा के छ भन्ने प्रष्ट हुने गरी कार्यक्रमको प्याकेज बनेको हुँदा पनि यी कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूले आफूलाई नीति निर्माणमा सक्रिय भएको ठान्न पाए। पूर्वबाट सुरु भएको यही प्याकेज पश्चिमसम्म पुग्नेछ।
कांग्रेससँग सरकार झुक्दै
६०१ संख्या रहेको संसद्मा नेपाली कांग्रेससँग ११४ सिटमात्र छ। राष्ट्रिय मुद्दालाई सही रूपले उठाउँदा यति सानो संख्याले पनि सरकारलाई उसका गलत निर्णयहरू फिर्ता गर्न र पटकपटक माझी माग्न बाध्य पार्दै आएको छ। सदनमा उसको कडा अडानका कारण बितेका केही महिनामा मात्रै सरकार आफ्नो गलत दर्जन जति निर्णय फिर्ता लिन र माफी माग्न बाध्य भयो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय त्यही सरकारले पटकपटक फिर्ता लिनु र माफी माग्नु सामान्य कुरा होइन। यसले संसद्मा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रष्ट पार्दछ।
प्रजातन्त्र दिवस नमनाउनु गल्ती
संसद्को दसौं अधिवेशन समापनको दिन सरकारले एउटा त्यस्तै विषयमा आफूले ठूलो भूल गरेको भन्दै माफी माग्यो। यो थियो, फागुन ७ राष्ट्रिय दिवस नमनाउनु। जनताले क्रान्ति गर्न थालेको १९१७ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भनी इतिहासमा उल्लेख भएको नेपालको २००७ को जनक्रान्तिको उपलब्धि घोषणा भएको दिन हो फागुन ७। यही क्रान्तिले १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोत बनाएको थियो। जुन त्यसपछिको जनआन्दोलनका लागि जग पनि थियो। यही जनक्रान्तिले देशमा पहिलोपटक जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाले संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गराएको थियो। त्यही बेलादेखि यो दिनलाई लोकतन्त्रको प्रतीकात्मक दिन भनी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै आएकोमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो पटक त्यसलाई मनाएन। संसद्मा तीव्र आवाज उठ्यो। अन्ततः त्यसपछि बसेको संसद्को बैठकमा सरकारले आफूबाट ठूलो भूल भएको भनी माफी माग्यो। राष्ट्रियस्तरका अखबारहरूले समाचार लेखे– ‘प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकोमा सरकारले माग्यो माफी’ त्यसको पेट बोलीमा लेखियो– सरकारले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएर इतिहासप्रति अपमान गरेको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो। (कान्तिपुर १० फागुन)। त्यही पत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीयमा भन्यो – ‘कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर यसलाई प्रजातन्त्र विरोधी कदम भन्दै यस्ता ऐतिहासिक दिवस समाप्त गर्ने दुष्प्रयास नगर्न माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सचेतसमेत गराएको छ।’
जनसत्ताको निर्णय गल्ती
यसको केही अघिमात्र सरकारले एउटा अर्को कथित ‘जनसत्ता’को निर्णयलाई वैधानिकता दिने भनी गरेको निर्णय फिर्ता लिएको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भए। यो निर्णय सामान्य रूपले फिर्ता भएको होइन। निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ लगत्तै बसेको संसद्को बैठकमा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले यसले जनतालाई आफ्नो जमिनबाट बेदखल गर्न खोजिएको छ। हाम्रा लागि यी किमार्थ मान्य छैन, हुँदैन अविलम्ब फिर्ता लेउ भनी चुनौती दिनुभएको थियो। त्यही क्षणदेखि चालू सदन अवरोधका क्रम सुरु भयो। त्यसमा सबै दललाई कांग्रेसले आफ्ना अडानमा सरिक बनायो र यो क्रम सुरु भएको पच्चीसौं दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर यो निर्णय फिर्ता भएको घोषणा गरे। फिर्ताको यस्तो घोषणा गराउनु सामान्य थिएन। माओवादीको औपचारिक संस्थाले यसलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने भनी निर्णय गरेको र त्यसअनुसार उसको जिल्ला र क्षेत्रीयताका संगठनहरूले निर्णय फिर्ता भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। तर कांग्रेसले छाडेन। आफ्नो अडानमा २५ दिनका ८ वटा बैठक अवरोध गरेपछि अन्त्यतः सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो।
प्रधानमन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई प्रतिपक्षीयको दबाबमा बर्खास्त गर्नु सामान्य कुरा होइन। सरकारको ६ महिनाको कालभित्र त्यो पनि भयो। मन्त्री प्रभु शाह र शरत्सिंह भण्डारी यो बर्खास्तीका पात्र हुन्। मन्त्री शाह व्यक्ति हत्याका योजनाकार भएको र भण्डारी राष्ट्रलाई टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएबापत प्रतिपक्षीका आँखामा परे। व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर आरोप लागेका मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गर्‍यो। विपक्षी सबै दलले उसलाई साथ दिए वा आफ्ना पक्षमा ल्याइयो। अन्ततः सदनको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गर्न पर्योा। बर्खास्तमा परेका मन्त्री भण्डारी सरकारमा संलग्न दलका र शाह प्रधानमन्त्रीकै सबैभन्दा रोज्जा पात्र थिए। यी विवरण त्यसबेलाका अखबारमा मुद्रित छन्। मन्त्रीहरूले कुनै आरोप लागेर नैतिकताका आधारमा रानीनामा दिनु सामान्य कुरा हो तर सदनमा विपक्षीय लगाएको आरोप खटेर प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै तिनलाई बर्खास्त गरिएको छ भनी घोषणा गर्नुपरेको अवस्था यो पहिलो पटक प्रकट भएको हो।
कर्मचारी सरुवा फिर्ता
यो सरकारले प्रशासनमा व्यापक हस्तक्षेप गरी नियम कानुन र प्रचलित मान्यताविपरीत पछिल्लो समय हजारौंको संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न थाल्यो। प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भए। नियमित प्रशासनिक कामसमेत ठप्प भयो। सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन प्रतिपक्षीको हैसियतबाट कांग्रेसले संसद्मा गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्यो र सरकारलाई कडा चेतावनी दियो। फलतः सरकारबाट यो निर्णय फिर्ता लिएर आफैंले गरेको सरुवा कार्यको आफैं छानबिन गर्न सरकार बाध्य भयो। पूरक बजेट फिर्ता
सरकार गठन हुनासाथ उसको कामको थालनी नै बजेट माथि हस्तक्षेप गर्ने रह्यो। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्र लाभान्वित तुल्याउने गरी, संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटलाई विस्थापित गरेर पूरक बजेट ल्याउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्योी र सोअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुन समयसमेत निर्धारण भयो। तर त्यसलाई कांग्रेसले व्यापक रूपले विरोध जनायो। यो बजेट आएको भए त्यो राष्ट्रिय नभएर माओवादीको हुने थियो। अहिलेसम्मको प्रचलनमा कुनै पनि बजेट बनाइँदा विपक्षीलाई पनि संलग्न गराइन्थ्यो। तर यो पटक चाहिँ जानकारीसमेत दिइएको थिएन। कांग्रेसको विरोधकै कारण निर्णय भइसकेको यो काम रोक्न सरकार वाध्य भयो।
यहीबीच सरकारले देशका लागि घातक काम गर्न थालेको थियो। त्यो हो व्यापक रूपले रकमान्तर गरी विकास निर्माणको कामलाई ठप्प पारेर आफू अनुकूल रकम खर्च गर्ने तयारी। यसरी चलिरहेका र संसद्को अनुमोदनमा तर्जुमा भएका आयोजनाहरू बन्द गरी प्रक्रियाभन्दा बाहिर माओवादीले प्रस्ताव गरेका नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न थालिएपछि कांग्रेस क्रूद्ध भयो र अख्तियारमा मुद्दा हाल्नेदेखि यो कार्य नरोके संसद् चल्न नदिनेसम्मको अडान व्यक्त गर्न थाल्यो। फलस्वरूप रकमान्तरको कार्य फिर्ता भयो।
नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा सम्पूर्ण गाउा तहसम्म शान्ति, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका लागि “गाउा जागरण तथा शान्ति अभियान” सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिबाट शान्तिप्रकृया तथा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका सन्दर्भमा तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा लिएका निर्णयहरू जनस्तरसम्म पुर्यािउनु अभियानको मुख्य लक्ष्य हुनेछ। साथै पार्टीको सांगठनिक गतिविधि एवं क्रियाशीलतालाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु यसको अर्को लक्ष्य हुनेछ। अभियानका कार्यक्रमहरू निम्न प्रकार हुनेछन्।
(१) २०६८ चैत्र १ गतेदेखि २०६९ वैशाख मसान्तसम्म
(क) गाउा कार्यसमिति र प्रत्येक वडामा वडा कार्यसमितिको नियमित बैठक महिनामा कमसेकम एकपटक अनिवार्य रूपले गर्ने परिपाटी बसाउने।
(ख) देशभर सबै गाउाहरूमा गाउा कार्यसमितिको आयोजनामा कार्यकर्ता भेटघाट, कार्यकर्ता भेला, अन्तरसंवाद तथा गाउा सभाहरूको आयोजना गर्ने।
(ग) साधारण सदस्यता वितरण अभियान (पार्टी प्रवेश) व्यापक रूपमा
(घ) देशभर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठक गराई समितिको आयोजनामा शान्ति र्यााली तथा सभाहरूको आयोजना गर्ने।
(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रका केन्द्रदेखि सबै तहका नेताहरूलाई उल्लेखित कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य रूपले सहभागी गराउने।
(२) २०६८ चैत्र १९ देखि २६ गतेसम्म ―
(क) सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा निम्न प्रकार तोकिएको मितिमा आमसभा गरिनेछ।
(ख) आमसभालाई केन्द्रीय नेता एवं केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्नु हुनेछ।
(४) पार्टी सभापति श्री सुशील कोइरालाको प्रमुख आतिथ्य र पूर्वप्रधानमन्त्री
श्री शेरबहादुर देउवा तथा उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता श्री रामचन्द्र पौडेलको विशिष्ट आतिथ्यमा २०६८ चैत्र २६ गते पर्सामा आमसभा हुनेछ। उक्त आमसभामा चितवन, मकवानपुर, बारा र रौतहट समेतका जिल्ल्ााहरूबाट सहभागिता गराउनुपर्नेछ।
क्र.सं. जिल्ला मिति
ज्ञ कैलाली २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
द्द इलाम २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
घ उदयपुर २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
द्ध धादिङ २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
छ तेह्रथुम २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ट सोलुखुम्बु २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ठ रामेछाप २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ड कास्की २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ढ गुल्मी २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ज्ञण् म्याग्दी २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ज्ञज्ञ प्यूठान २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ज्ञद्द जुम्ला २०६८ चैत्र १९ गते आइतबार
ज्ञघ बर्दिया २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
ज्ञद्ध झापा २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
ज्ञछ सिराहा २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
ज्ञट डाडेलधुरा २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
ज्ञठ बाजुरा २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
ज्ञड कालीकोट २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
ज्ञढ सल्यान २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
द्दण् पर्वत २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
द्दज्ञ रूपन्देही २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
द्दद्द गोरखा २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
द्दघ सिन्धुपाल्चोक २०६८ चैत्र २० गते सोमबार
द्दद्ध बााके २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
द्दछ मोरङ २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
द्दट धनुषा २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
द्दठ ताप्लेजुङ २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
द्दड खोटाङ २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
द्दढ ललितपुर २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
घण् स्याङ्जा २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
घज्ञ पाल्पा २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
घद्द बागलुङ २०६८ चैत्र २१ गते मंगलबार
घघ धनकुटा २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
घद्ध महोत्तरी २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
घछ भोजपुर २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
घट कञ्चनपुर २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
घठ डोटी २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
घड हुम्ला २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
घढ दाङ २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
द्धण् मुस्ताङ २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
द्धज्ञ लमजुङ २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
द्धद्द काभ्रे २०६८ चैत्र २२ गते बुधबार
द्धघ सुर्खेत २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
द्धद्ध सुनसरी २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
द्धछ सिन्धुली २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
द्धट पााचथर २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
द्धठ ओखलढुंगा २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
द्धड रसुवा २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
द्धढ मनाङ २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
छण् अर्घाखााची २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
छज्ञ रुकुम २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
छद्द डोल्पा २०६८ चैत्र २३ गते बिहीबार
छघ कपिलवस्तु २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
छद्ध सप्तरी २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
छछ सर्लाही २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
छट बैतडी २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
छठ बझाङ २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
छड दैलेख २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
छढ रोल्पा २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
टण् तनहुा २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
टज्ञ भक्तपुर २०६८ चैत्र २४ गते शुक्रबार
टद्द नवलपरासी २०६८ चैत्र २५ गते शनिबार
टघ संखुवासभा २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
टद्ध दोलखा २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
टछ नुवाकोट २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
टट काठमाडौा २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
टठ मुगु २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
टड जाजरकोट २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
टढ अछाम २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
ठण् दार्चुला २०६८ चैत्र २६ गते आइतबार
चर्चित प्रंसग (देशान्तर)
८ चैत्र २०६८, बुधबार १९:५४ मा प्रकाशित